गजल के हो ? गजल कसले लेख्ने ? कस्तो लेख्ने ? « Swadesh Nepal
गजल के हो ? गजल कसले लेख्ने ? कस्तो लेख्ने ?
गजललाई अब परिभाषित गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन. किनकि गजलका बारेमा अहिलेका नयाँ पुस्ता बिशेष जानकार छन्के. त्यसैले गजल के हो र के हैंन भन्नुभन्दा पहिले गजलको सुरुवात कहाँबाट भयो ? गजल नेपालमा कहिले प्रवेश गर्यो ? कसले प्रवेश गरायो ? यसको प्राथमिक काल र माध्यमिक कालमा केकस्ता गजल लेखिए ? गजलको आधुनिक काल कहिले नेपालमा सुरु भयो ? सुरुवातकताॅ को को हुन् ? उनीहरुको होस्टेमा हैंसे गनेॅ को को हुन् ? गजललाई लामो रचनाको पूछारमै भए पनि स्थान दिनेपत्रपत्रिका कुन कुन हुन् ? नेपाली साहित्यमा पहिलो गजल कृति कुन हो ? पहिलो सामुहिक संकलन कुन हो ? गजल विषयक रचनालाई मात्र स्थान दिने गजल प्रधान पत्रिका कुन कुन हुन् ? नेपाली साहित्यमा पहिलो गजल प्रधान पत्रिका कुन हो ?
नेपाली गजल साहित्यमा सयौ स्रष्टा, सम्पादक र प्रकाशकहरुको अथक मिहिनेत, योगदान र लगानी छ । उनीहरुको योगदानले नै आज नेपाली गजल गजल भएको हो । त्यसैले आज आएर लहडमा वा प्रचारमोहमा कसैले नेपाली गजलको ज्ञाता मैं मात्र हुँ भन्छभने पहिला उसले माथि उठाइएका प्रश्नहरुको इमान्दार जवाफ दिउन् र भनुन् उसले संख्याकै हिसावले आजसम्म कतिवटा गजल लेख्यो र प्रकाशन गर्यो ? कतिवटा कृति निस्कियो ? नेपाली गजलको विकासका लागि उसले गफबाहेक के के काम गर्यो ? नेपाली गजल फस्टाउँनमा उसको कति दशकको लगानी छ ?
यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे – मोतीराम भट्ट
उता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन् – मोतीराम भट्ट
बनारसमा अध्ययनका लागि पुगेका मोतीराम भट्टबाट नै आधिकारिक रुपमा नेपाली साहित्यमा गजल लेखन भित्रिएको हो. तर तत्त्कालीन राणा अनि शाहहरुका दरबारमा तालिमे नानी र भारतीय गवैयाहरू मार्फत नेपालमा गजल भित्रिसकेको थियो. यस बारेमा संगीतकार स्व. मदन परियार निकै जानिफकार हुनुहुन्थ्यो. सुरुवाती नेपाली गजल लेखनमा उर्दु र हिन्दि भाषाको कतिसम्म प्रभाव परेको थियो भनेर जान्नका लागि बिशेषत: उपेन्द्रबहादुर जिगरका गजल हेरे पुग्छ. तत्कालीन दरबारहरुमा गाइने गजल त हिन्दी वा उर्दूको सिधै अनुवादजस्तो वा नेपाली, हिन्दि र उर्दूको खिचडीजस्तो थियो. जे भए पनि त्यो स्थितिलाई पार गर्दै आएर आज नेपाली गजल साँच्चैको नेपाली गजल भैसकेको छ र अब यसलाई आयातित विधा पनि भनिरहनु पर्दैन भन्ने लाग्छ.
उपेन्द्रबहादुर जिगर जिगर, भीमनिधि तिवारी, मोतिराम भट्ट, मनु ब्राजाकी, वियोगी बुढाथोकी, लव गाउँले, ध्रुब मधिकमीॅ, ज्ञानुवाकर पौडेल, श्रेष्ठ प्रिया पत्थर, बूँद राना, सनतकुमार,धमोॅगत शमाॅ तूफान, विजय वजिमय, रोशन राजभण्डारी, आरबि फ्लेम लगायत थुप्रै पुराना अनि थुप्रै नयाँ गजलकारहरुको योगदानले नै आज नेपाली गजल लेखन, गायन र वाचन तिनै क्षेत्रमा अग्रणी साहित्यिक विधाको रुपमा लोकप्रिय रहेको छ । गजल स्रष्टाका अलावा नेपाली गजललाई लोकप्रिय बनाउँन लोचन भट्टराई, अरविन्द मालाकार, अन्जु पन्त, रोशन राजभण्डारी, शक्तिवल्लभ, ज्ञानु राणा , शिव परियार लगायत थुप्रै गायक, गायिका अनि संगीतकारहरुको पनि योगदान छ । नेपाली गजलको बिरुवालाई हुर्काउनमा विशेषत: मोति मण्डली र मोति मण्डलीमा आवद्ध गजलकारहरुको ठूलो योगदान छ जसलाई बिर्सेर नेपाली गजल अगाडी बढ्न सक्दैन.
त्यसैले कुनै एक व्यक्तिको लगानीले मात्र नेपाली साहित्यमा गजल गजल भएको हैन यसमा सबै उमेरका गजलकारहरुको महत्वपूणॅ योगदान छ । अरु केही होइनन् ममात्रै नै सबैथोक हुँ भन्ने अहम्वादी संकीणॅ सोंच र चिन्तनबाट बाहिर निस्केर हेरौं कुवाभन्दा बाहिर पनि संसार छ ।
गजल आजका दिनमा नेपाली साहित्यमा अत्यन्त लोकप्रिय विधाका रुपमा अगाडी आइसकेको छ विशेषत: युवा श्रष्टाहरु र श्रोताहरुका माझमा आज लोकप्रियताका दृष्टिले यो विधा अग्गा छ भन्दा फरक नपर्ला. किनकि हिजोका दिनदेखि नै नेपाली गजलले आफ्नो अभिव्यक्तिमा केवल अल्लारे मायाप्रितिको भाव मात्र नबोकेर यसले देश,काल र परिस्थितिलाई पनि अभिव्यक्त गर्दै आएको थियो र आज पनि गर्दै आइरहेको छ. त्यसैले पनि यो अभिव्यक्तिको शसक्त माध्यमका रुपमा अगाडी आइरेह्को छ.
फलानो र ढिस्कानोले वेद पढ़े पागल हुन्छन् भन्ने जातीय संकीणॅ सोंचलाई त समय ले भत्काउन बाँकी राखेनभने साहित्य को यो विधा तेरोमात्र र यो विधाचैं मेरोमात्र भन्दा कति समयसापेक्ष होला ? यो तकॅलाई आज उमेरको छ दशकको हाराहारीमा पुगेको व्यक्ति मैले त मान्न तयार छैनभने आजका युवा गजलकारहरुले झन मान्लान् त ? यस्ता हास्यास्पद तर्कको कुनै अर्थ र आयु हुँदैन.
समय गतिशील हुन्छ र गतिमै प्रगति हुन्छ । समयलाई उल्टो घुमाउँने प्रयास हास्यास्पदमात्रै हुन जान्छ । अभिव्यिक्तका लागि गजल पनि सबै उमेर, समूह र लिंगका स्रष्टाका लागि हिजो पनि खुल्ला थियो, आज पनि खुल्ला छ र भोलि पनि खुल्ला रहने नै छ । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ, बन्देज लाउने चेष्टा पनि नगरे हुन्छ.
त्यसैले नेपाली साहित्यमा हिजोका दिनहरुमा गजल लेख्नेहरु र आजका दिनहरुमा लेखिरहेकाहरु सबैप्रति मेरो प्रेम र सम्मान छ ।